दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्रीकहाँ अडियो पुर्‍याएका थिए मिश्रले! यो खेलमा अरू को–को छन् ? -
दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्रीकहाँ अडियो पुर्‍याएका थिए मिश्रले! यो खेलमा अरू को–को छन् ?
काठमाडौं। सञ्‍चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको कार्यकक्षमै पुगेर अडियो रेकर्ड गर्ने विजय मिश्र जापान बसेर नेपाल फर्केका हुन् । नेपालमै मेसिनरी एन्ड सेक्युरिटी प्रालि स्थापना गरेर सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेसकै क्षेत्रमा काम गरेको बताउने उनी स्विट्जरल्यान्डको एक कम्पनीका प्रतिनिधिसमेत हुन् ।
कतिमा ‘डिल’ थियो ?